Makeup yamadoda: ukufihla izangqa ezimnyama | Amadoda aQinisekileyo
Yiba neklasi | | Zokuthambisa, yokuPhila
Enye yezona zinto ziphambili kubuhle bamadoda kukufihla izangqa ezimnyama ezoyikekayo. Ukungabikho kokulala, ukudinwa okanye uxinzelelo kuthabatha inkangeleko yethu kwaye kunciphise ukuqaqamba kwamehlo ethu. ¿Uyayazi indlela yokufihla izangqa ezimnyama nge-makeup?
Los izixhobo zendalo, ezinje ngekhukhamba okanye izilayi zamazambane, kunye neparsley infusions, ziya kunceda ukunciphisa izangqa ezimnyama kunye nokudumba kwaye kuthintele 'ubuso obunobuthongo' obungathandekiyo. Inyathelo lesibini kukundikubuze imveliso ethile yeliso lwamehlo, kwaye ufihle izangqa ezimnyama ngokwenza izithambiso.
Isitshixo kukukhetha imveliso elungileyo yokufihla kwaye uyisebenzise ngokuchanekileyo. Baninzi okwangoku Iimveliso ezibini nganye ngonyango kunye nokufihla. Ukuba ufuna into ekhawulezayo nekulula ukuyisebenzisa, esi iya kuba sisisombululo sakho. Eminye imizekelo: 'Amandla eBronze' yiBiotherm, ehambisa ulusu ngamehlo kwaye ifihle iimpawu zokudinwa; 'Iresiphi yamadoda', enciphisa ukukhukhumala kunye nezangqa ezimnyama kunye nokufihla amabala; okanye i-Garnier '2-in-1 concealer roll', enesiphumo esipholileyo kunye nokuchukumisa umbala.
Ngoku lixesha lokusasaza i-concealer ngaphezulu kwesangqa esimnyama. Ungazami ukugubungela izangqa ezimnyama usebenzisa imveliso eninzi, kungcono ukuba uyisebenzise ubungakanani obuncinci kwaye buhanjiswe kakuhle yempembelelo yendalo ngakumbi. Ukuba izangqa zakho ezimnyama zibhengezwe kakhulu, awuyi kuba nakho ukuzicima ngokupheleleyo, fihla nje umbala wazo kwaye ukhanyise ukujonga.
Ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo, sebenzisa iminwe yakho. Faka isixa esincinci kwaye usasaze ngaphezulu kwesangqa esimnyama nge imivumbo emincinci ngomnwe. Faka isixa esincinci ekuqaleni, uyakuhlala unalo ixesha lokufaka ngaphezulu xa kukho imfuneko, kodwa ungaze umxhaphaze umfihli okanye uya kugqibela ujonge ibhere le-panda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Makeup yamadoda: ukufihla izangqa ezimnyama
Iibhutsi ezintle zokuhamba intaba, iDrifter Gv Mm nguAsolo
UNike uhambisa izihlangu zikaRafa Nadal